လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: ရှေးထုံးလဲ ပယ်မှ - ၂
အ ၀တ် အ စား က န့် သ တ် ချ က် မ ရှိ ၊ နှ စ် သ က် ရာ ကို ၀ တ် စား ဆ င် ယ င် နို င် ပါ သ ည် ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ လက်မှတ်စောင်ရေပေါင်း
စောင် တိတိ ရောင်းချခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ရှေးထုံးလဲ ပယ်မှ - ၂
ချစ်သူ ၂ ဦးတို့ လက်ထပ်ဖို့အတွက် လက်ထပ်တဲ့ရုံးကို သွားကြတာပါ။ အဲဒီမှာ ရှိတဲ့စာရေးမက ရိုးရာ အစဉ်အလာအတိုင်း လက်ထပ်ဖို့ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်ကို အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆီးကြို ပြောကြားပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ သတို့သမီးရဲ့ ခါးအရွယ်အစားကို မေးပြီး လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလို့မရအောင် သော့ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ ကိရိယာကို ထုတ်ပေးပြီး မိန်းကလေးကို ၀တ်ခိုင်းပါတယ်။ သတို့သားကို သော့အပ်ပါတယ်။ (အလယ်ခေတ်မှာ စတင်တီထွင်ခဲ့တဲ့ အဲဒီကိရိယာက သတို့သားအနေနဲ့ သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ သတို့သမီးကို တခြားလူနဲ့ ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းလို့မရအောင် သော့ခတ်ထားလို့ရသလို၊ မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ကတည်းက ကိုယ်ဝန်ရှိနေခဲ့ရင်လဲ သတို့သမီးကို - ၀မ်းဗိုက်ကို ချုပ်ထားခြင်းဖြင့် - သေဆုံးစေနိုင်ပါတယ်။)
သတို့သမီးက အဲဒါနဲ့ သော့ခတ်ထားမခံနိုင်ကြောင်း၊ အဓိပ္ပါယ် လုံးဝမရှိကြောင်း ပြောတဲ့အခါ စာရေးမက အို … ရိုင်းလိုက်တာ၊ ဘုရားစကား နားထောင်ရမှာပေါ့ လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။ (အင်း … ကလေးဆိုတာ လူကြီးစကား နားထောင်ရမှာပေါ့တို့၊ ဆရာ/မကပြောနေတာကို ကလေးတွေက နားထောင်လိုက်ဖို့ပဲ ရှိတယ်၊ ပြန်မေးဖို့ မရှိဘူးတို့ကို ကြားယောင်ရင်း လွမ်းတောင် လွမ်းမိတယ်နော်။) သတို့သားက အဲဒါတွေ သူမလုပ်ချင်ကြောင်း ၀င်ပြောတဲ့အခါမှာ ရွေးစရာလမ်းမရှိကြောင်း စာရေးမက ဟောက်သံလေးစွက်လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။ ခက်ပါလားနော်။
ပြီးတော့ မြို့ဝန်ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါတယ်။ မြို့ဝန်ဘာလုပ်ဖို့တုန်းလို့ သတို့သားကမေးတာကို ပြန်မဖြေပဲ နင့်ဆိတ်တွေဘယ်မှာလဲလို့ စာရေးမရဲ့ အသံထွက်လာပါတယ်။ ဘာ … ဆိတ် ကရော ဘာလုပ်ဖို့လဲလို့ သတို့သားက အံ့သြတကြီး ပြန်အမေးမှာ ဆိတ် ၇ ကောင်ကို ရိုးရာ အစဉ်အလာအတိုင်း သတို့သမီးရဲ့ ဖခင်ကို ပေးဖို့ (တင်တောင်းဖို့) လေဆိုတဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ လေသံလေးကို ကြားရပါမယ်။ သတို့သားက သူငါနဲ့ လက်ထပ်ချင်တာ၊ ငါသူ့ကို ၀ယ်နေတာ မဟုတ်ဘူး ဆိုပြီး ဒေါသသံ စွက်လာပါတော့တယ်။ ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ။
မြို့ဝန်ရောက်လာပါပြီ။ သတို့သားက ဘာတွေဖြစ်တာတုန်း မေးနေချိန်မှာ သတို့သမီးကို မြို့ဝန်ရဲ့လူတစ်ယောက်က ထမ်းခေါ်သွားပါတော့တယ်။ သတို့သားက ဘာလုပ်မလို့တုန်း မေးတော့ ပန်းဦးဆက်ဖို့ ဆိုပဲ။ စာရေးမက ပြောတာကတော့ မင်္ဂလာဦးညမှာ ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ပန်းဦးချွေတာလဲ ရိုးရာ အစဉ်အလာဆိုပဲ။ (တို့ဗမာတွေ ပုဂံခေတ်ကတည်းက ခေတ်မီတယ်နော်၊ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးတွေ ဘာတွေလုပ်လို့။) ဆိတ်တွေသွားပေးပြီး ယောက္ခမကြီးဆီက ထောက်ခံစာ ယူလာမှ လက်ထပ်စာချုပ် လုပ်ပေးလို့ရမယ်ဆိုပဲ။
အိုး … သတင်းဆိုးပါတဲ့။ ဘာများပါလိမ့်။ သတို့သမီးက အပျိုရည်ပျက်ပြီးသား ဆိုပဲ။ ဒါကြောင့် မသေမချင်း (သမ္မာကျမ်းစာဟောင်းအရ) ကျောက်တုံးနဲ့ ပစ်ပေါက်သတ်ရမယ်ဆိုပဲ။ ကျောက်တုံးတောင် အသင့်ရောင်းလိုက်သေး။
စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ဟာသလုပ်ထားတာလေးပါ။ သိပ်ရယ်ရပါသလား၊ အူတောင် နှိပ်နေရသလား၊ ခဏရပ်ပါဦး။ မြန်မာအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလဲ ရူးသွပ်မိုက်မဲတဲ့ ရှေးရိုး အစဉ်အလာဟောင်းတွေကို အတင်း အဓမ္မ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းနေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလို လူသားမဆန်တဲ့ ကိစ္စတွေ ပိုမို ဆိုးဝါးမလာအောင်၊ ပပျောက်သွားအောင်၊ လူသားများထက် ပိုမိုလူသားဆန်တဲ့ လူ့အသိုက်အ၀န်းကို ချီတက်ကြဖို့ စာရှုသူတို့နဲ့ စာရေးသူ လောရှည်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရှေးထုံးလဲ (ပယ်ဖို့လိုလာရင်) ပယ်မှ။
Posted by Law Shay at 1:49 AM
Labels: မြန်မာ့ရေးရာ, အစဉ်အလာ, တော်လှန်ရေး
ရှေးထုံးတွေ တစ်ချို့ ပယ်သင့်တာတွေ ပယ်ရမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ မရယ်ရပါ၊ အူလည်း မနှိပ်ရပါ၊
ဗွီဒီယိုလေးက တိုတိုလေးနဲ့ သူပေးချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေးသွားနိုင်တယ်... အိုင်ဒီယာကောင်းတယ်...
:::::: Mr.Sail0rMoon ::::::
အနုပညာ (ရသစာပေ) (19)
သင်္ချာနှင့် သိပ္ပံ (13)
လူမှုရေး သိပ္ပံ (11)
ကွန်ပျူတာ သိပ္ပံ (6)
အနုပညာ (ရုပ်ရှင်) (5)
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ (4)
အနုပညာ (ဂီတ) (3)
သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ (2)
သင်္ချာနှင့် သိပ္ပံ (1)
အာကာသ သိပ္ပံ (1)
ဥာဏ်စမ်းပဟေဠိများကို ကွန်ပျူတာ အသုံးပြု ဖြေရှင်းခြင်း
လောရှည် . ကွန်း(မ်)၊ လောရှည် - ကတဲ့ပွဲနှင့် ဤ "လောရှည် . ကွန်း(မ်)" ဒိုမိန်း အောက်တွင် ဖော်ပြထားသော အခြားစာသား၊ ရုပ်ပုံ၊ အသံ၊ ရုပ်ရှင်၊ အပျော့ထည်များနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော ဥာဏပစ္စည်းအားလုံးသည် အခြား ပိုင်ရှင် အမည်ဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါက လောရှည်၏ မူပိုင်ဖြစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် ၄င်းတို့နှင့် ၄င်းတို့၏ မူပွားတို့ကို သိမ်းဆည်းထားသော အီလက်ထရွန်နစ် ပစ္စည်းနှင့် အခြား အလားတူ ပစ္စည်းတို့ (ပုံနှိပ်စက္ကူ အပါအ၀င်) တည်ရှိရာ နိုင်ငံအသီးသီး၏ မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများ၏ ကာကွယ်မှုအောက်တွင် တည်ရှိသဖြင့် လောရှည်၏ စာဖြင့် ခွင့်ပြုချက်ကို ကြိုတင်မရယူပဲ စီးပွားရေးအရ ငွေကြေး အကျိုးအမြတ် တစုံတရာရရှိရန်အတွက် (ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်း အပါအ၀င်) သုံးစွဲခဲ့ပါက ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများ၏ တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ ရာဇ၀တ်မှုကြောင်း၊ တရားမမှုကြောင်းတို့ဖြင့် အရေးယူခံရမည် ဖြစ်သည်။